आज जनै पूर्णिमा तथा रक्षाबन्धन मनाइदै, आज क्वाँटी किन खाइन्छ ? « Bizkhabar Online
आज जनै पूर्णिमा तथा रक्षाबन्धन मनाइदै, आज क्वाँटी किन खाइन्छ ?
22 August, 2021 9:32 am
काठमाडौँ । प्रत्येक वर्ष श्रावण शुक्ल पूर्णिमाका दिन मनाइने रक्षाबन्धन, जनै पूर्णिमा (ऋषि तर्पणी) पर्व आज देशभर नव यज्ञोपवीत एवं रक्षाबन्धन धारण गरेर मनाइँदै छ । पूर्णिमाका दिन बिहानैदेखि वैदिक सनातन धर्मावलम्बीले नदी, ताल, तलाउ, पोखरीमा गई स्नान गरेर गुरु पुरोहितबाट रक्षासूत्र बाँध्छन् । गुरु पुरोहितले विधिपूर्वक मन्त्रिएको यज्ञोपवीत एवं डोरो (रक्षासूत्र) धारण गरेमा नकारात्मक तत्वबाट सुरक्षा प्राप्त हुने धार्मिक विश्वास छ ।
यस पर्वका अवसरमा केही वर्षअघिसम्म सार्वजनिक बिदा दिर्ने गरिएकामा पछिल्ला बर्ष कटौतीमा परे पनि यस बर्ष सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएको छ ।-रासस